Ny volo amin'ny vono-n'ny vehivavy, ara-dalàna ve izany? | Bezzia
Sasao amin'ny nipples
Maria Jose Roldan | | beauty
Na dia tsy tianay aza izy ireo dia eny ny valiny, indraindray dia mivoaka izy ireo volo eo amin'ny nipples. Ny fananana volo ao amin'ny faritry ny nipple dia ara-dalàna tanteraka ary miverina amin'ny lova voajanahary avy amin'ireo razambentsika, izay feno volo tanteraka ny vatany. matetika mazàna dia vitsy ny volo mivoaka, saika maizina be foana, izay maniry haingana. Tena tsy dia mahita izy ireo, izany no antony tsy maintsy hanesoranao azy ireo, indrindra raha tsy te-hahatsapa ianao fa ratsy tarehy ny nononao.
Faritra tena marefo misy hoditra marefo, Tsy mamporisika anao hampiasa savoka na crème depilatory mahery, satria afaka mandratra ny hoditra amin'ny volo kely ianao. Ny laser dia mety ho safidy iray, fa noho ny habetsaky ny volo sy ny fanaintainana mety hateraky ny fitsaboana dia manoro hevitra anao koa aho ny amin'izany.
Beter 34062 - Tweezers, ...
Ary tsy manana fomba hafa afa-tsy ny fampiasana ny tweezers izahay. Na dia tsy voafaritra aza io fomba io (ny mifanohitra amin'izay indrindra), vehivavy maro no mihevitra azy io ho mahasalama indrindra amin'ny rehetra. Tokony hotadidintsika fa, saika matetika, amin'ny fampiasana an'io fomba io, ny volo dia mihalehibe ary mihoatra ny iray aza ny volo mivoaka avy amin'ny mason-koditra iray ihany.
Fa eto ambanyHiresaka aminao amin'ny an-tsipiriany kokoa momba izany aho., mba tsy ho taitra ianao raha volo ara-dalàna izy ireo, mba hahafantaranao hoe inona ireo mety tsy ara-dalàna ary mba hahitanao ny fomba tsara indrindra hanalana azy ireo.
Ahoana ny fanesorana ny volo amin'ny nipples
1 Volo eo amin'ny vono
2 Rehefa ara-dalàna ny volo eo amin'ny nipples
3 Ahoana ny fanesorana ny volo amin'ny nipples
Volo eo amin'ny vono
Vehivavy maro no miahiahy momba ny volo maniry manodidina ny nonon'ny nosy, ary raha ny tena izy, io dia iray amin'ireo ahiahy matetika atrehan'ny vehivavy amin'ireo mpitsabo aretim-behivavy. SAINGY ny fananana volo amin'ny nononao dia mahazatra kokoa noho izay azonao eritreretina, ary matetika izany no mitranga amin'ny vehivavy manana volo voajanahary maizina toy izay amin'ny vehivavy manana volo maivana kokoa.
Ireo faritra manodidina ny tampona na areola dia misy folikelin'ny volo, toy ny faritra hafa amin'ny vatan'olombelona ihany. Ny volo eo amin'ny tratran'ny vehivavy dia zara raha hita raha oharina amin'ny volo manodidina ny nonon'ny lehilahy maro, izay matetika manana volo betsaka amin'ity faritra ity sy manerana ny tratra. Izany dia vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny lahy sy ny vavy izay misy fiantraikany amin'ny fizarana volo.
Na izany aza, indraindray ny vehivavy dia mamorona volo lava manodidina ny nonon'ny nosy ary izany dia mifandraika amin'ny fiovan'ny hormonina mifandraika amin'ny fahamaotiana, fadimbolana, fitondrana vohoka ary fadim-bolana. Mandritra ny androm-piainan'ny vehivavy, ny fiovaovan'ny haavon'ny hormonina dia mahazatra ka hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny volo koa izany. Misy ny vehivavy manapa-kevitra ny mihinana pilina fanabeazana aizana Ary izany dia antony iray hafa mety hisy fiatraikany amin'ny haavon'ny hormonina ary miteraka fitomboan'ny volo manodidina ny nipples. Fiovana hormonina ireo ary tsy tokony hiteraka ahiahy.
Rehefa ara-dalàna ny volo eo amin'ny nipples
Na dia efa nolazaiko taminao fotsiny aza fa ny fananana volo manodidina ny nono dia tsy tokony hiteraka ahiahy, misy antony sasany izay mety hanondro fa misy zavatra tsy mandeha tsara. Mila mitandrina ireto andalana manaraka ireto ianao hahalalanao raha volo ara-dalàna izany na raha tokony hanatona dokotera.
Misy tranga tsy fahita firy izay rehefa maniry manodidina ny volo ny volo dia mety ho mariky ny aretina ara-pahasalamana tsy ara-dalàna. Ny fitomboan'ny volo be loatra amin'ny vehivavy manana modely toa ny lahy dia fambara iray antsoina hoe "hirsutism." Ny hormona lahy be loatra dia mampitombo ny estrogen izay miteraka fitomboana tsy ara-dalàna ao amin'ny id, ary izany rehetra izany dia mety vokatry ny antony maro:
Aretina ovary polycystic. Misy fiantraikany amin'ny vehivavy 1 amin'ny 15 ity aretina ity ary miteraka tsy fandanjalanjana ny hormonina ara-pananahana miteraka olana eo amin'ny ovotra sy ny volo be loatra amin'ny vatana, ao anatin'izany koa ny nipples Rehefa mamokatra andrôgena (hormonina firaisana ara-nofo lahy) ny atody dia tsy afaka mamoaka atody ny atody ary afaka mivoatra koa ny kista. Ho fanampin'izany, ny soritr'aretina hafa dia misy ny tsingerina tsy tonga fotoana ara-potoana, ny mony, ny fiakarana lanja, ny fihenan'ny fahavokarana, ny fihenan'ny volo eo amin'ny hodi-doha ary na ny fahaketrahana. Tsy maintsy tsaboina io toe-javatra io satria mety hiteraka diabeta na aretim-po koa izany.
Aretin'i Cushing. Ity olana hormonina ity dia tsy fahita firy ary vokatry ny fiakaran'ny haavon'ny hormonina kortisol izay mety hiteraka hirsutism. Izany dia mety vokatry ny fampiasana tafahoatra ny fanafody kortikosteroid, toy ny prednisone, na noho ny fivontosana ao amin'ny ati-doha na ny fihary adrenal. Ireo soritr'aretina dia mitovy amin'ny an'ny PCOS.
Ny faritra nipple dia faritra marefo amin'ny vatan'olombelona ary tsy mendrika ny fampiasana endrika fanesorana volo, ohatra, ny milina epilating elektrika na savoka dia tsy fomba tsara hanaovana azy satria mety handratra ny hoditrao ianao. Misy vehivavy menatra ny volon-tsolony ary manapa-kevitra ny hanala azy ireo.
Ny tena fahita indrindra dia ny fampiasana ny tweezers ny vehivavy mba hamoahana azy ireo hiala amin'ny faka ary hanasarotra azy ireo hiverina. Saingy tsy mety izany satria afaka mihalehibe izy ireo ary miteraka volo mihombo ary lasa voa. Fomba iray hafa mora sy tsy maharary ny manapaka azy ireo amin'ny hety kely ary mitandrina tsara mba tsy hanapaka ny tenanao.
Fa, raha ny zavatra tadiavinao dia fomba hafa be pitsiny kokoa hanalana ny volo amin'ny nononao, dia azonao atao ny manisa ireto hevitra manaraka ireto ary misafidy izay mety indrindra aminao:
Fampiasana depilatoria simika: gel, menaka na menaka fanosotra
Ny herinaratra ho fomba fanalana volo maharitra. Ny matihanina iray dia manimba ny follicle volo ambanin'ny hoditra.
Fitsaboana hormonina na fampiasana fanabeazana aizana am-bava hanampiana amin'ny tsy fandanjana hormonina izay mety hiteraka fitomboan'ny volo be loatra.
Fanesorana volo laser. Izy io dia misy ny famoahana ny fakan'ny volo amin'ny hazavana miparitaka na amin'ny laser fitsaboana.
Raha tena miahiahy momba ny fitomboan'ny volo mihombo amin'ny nipples ianao dia tokony manatona dokotera hahafantarana izay mety ho antony manjo anao ary hahafahanao mahita fitsaboana sahaza anao izay natao ho anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Sasao amin'ny nipples
Brenda dia hoy izy:
Azonao atao ve ny milaza amiko fa afaka mandray aho mba hitombo ny sakafo hariva
Mamaly an'i brenda
Gerardo dia hoy izy:
Tsy haiko raha afaka manapaka ny volo amin'ny hety aho
Valio amin'i GERARDO
santiago arancio dia hoy izy:
misaotra ny bilaogy na ny vaovao nitadiavako valiny hatramin'ny lasa izay dia nahatsikaritra volo teo amin'ny tratran'ny vadiko aho. misaotra betsaka anao doc tsy nanana hevitra n'inona n'inona. Hiresaka aminy aho fa tsy haiko hoe rahoviana na rahoviana no hitondrana azy.
Raha azonao omena vahaolana ny fomba hiatrehako ilay olana miaraka aminy mba tsy ho ratsy izy satria azoko tsara fa olana marefo ho an'ny vehivavy izany ary tsy tiako ny hanaovan'ny vadiko azy amin'ny fomba diso.
Miandry ny valinteninao amin'ny mailaka aho.
Manaova veloma Atte. Santiago Arancio avy any Córdoba, Arzantina.
Mamaly an'i santiago arancio
Ny Paw Patrol dia tonga hamonjy harena iray ary manampy ny polisy
Sakafo matavy ambany sy mahasalama 8